Android 7.0 Nougat Review - News Ọchịchị
Aghụghọ elu mgbanwe, gụnyere mma Ịma Ọkwa na mma multitasking, na ikpuchi ukwu ndozi n'okpuru na a siri ike nzọụkwụ-atụ maka Android
Isiokwu a na-akpọ “Android 7.0 Nougat review: ogologo ndụ batrị na ngwa ngwa na ime ihe” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Monday 22 August 2016 17.00 UTC
Android 7.0 Nougat bụ ọhụrụ version nke Google si mobile sistemụ, -eji ọtụtụ ijeri ngwaọrụ gburugburu ụwa.
Ọ na atụmatụ ogologo ndụ batrị, mma multitasking na echeta Ịma Ọkwa na a slimmed ala na nụchara anụcha Android ahụmahụ - esonụ na ọrụ mere na ikpeazụ afọ version 6 Marshmallow
Ọ bụ ngwa ngwa, ọzọ polished na a subtly-mma ahụmahụ dum gburugburu. Apps wụnye ngwa ngwa, na OS nwere ike nta na-aba na mmelite Android nwere ike arụnyere na ada, enweghị na-eche ka 10 nkeji mgbe ọ reboots, ma ọ bụrụ na i nwere a ọhụrụ ngwaọrụ. The ọhụrụ Vulcan API ndịna-emeputa usoro a na-ghere n'ihi na mma-egwu ya edekọ arụmọrụ na Nougat ga na-akwado Google si NR mebere eziokwu usoro, emecha.
Nougat abụghị, Otú ọ dị, a isi visual overhaul nke Android. Ndi-eji Marshmallow on ọ bụla nke Google si Nexus smartphones ma ọ bụ ngwaọrụ na obere n'ụzọ nke mgbanwe na-Android, dị ka OnePlus 3, ga-ntabi na-aghọta na ọ.
Nke a nyochaa E duziri iji a tupu ntọhapụ version of Nougat na-agba ọsọ dị iche iche Google Nexus na Pixel ngwaọrụ, dị ka ndị dị otú ahụ ụfọdụ obere ihe nwere ike ịdị iche na mmepụta version of Nougat tọhapụrụ taa.
Improved Ịma Ọkwa
Nougat na-eme ka ngwa anata ndabere maka fọrọ nke nta niile nkwurịta okwu dabeere na Ịma Ọkwa. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ na-arahụ n'azụ Mpaghara ma onye doro anya mgbanwe Nougat bụ Ịma Ọkwa. Ha na-na now ito eto na wider, -ejuputa dum obosara nke ihuenyo na a ama, ma sonyere ozugbo na onye ọ bụla ọzọ, nke wastes na-erughị ohere karịa Marshmallow si kaadị-dị ka ọdịdị. Multiple Ịma Ọkwa si na otu ngwa na-ejupụta ọnụ, nke dị ọcha elu na ngosi ndò na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịhụ ihe bụ ihe na a ilekiri na-eleghara en masse.
Nnukwu ọtọ mgbanwe n'ihi na Ịma Ọkwa, Otú ọ dị, bụ wider mpịakọta nke ngwa zara na ọrụ. Google si ngwa ọdịnala dị ka onye ozi na Hangouts nwere ngwa zara na nke a mgbe ma ugbu a, ihu ọma ọ bụla nkwukọrịta ngwa kwesịrị inwe atụmatụ.
Ọrụ nwere ike kụrụ zara si ngosi na pịnyere ozi ha kpọmkwem n'ime igbe dị n'okpuru ngosi, nke ga-ga-egosi a obere snippet nke akụkọ ihe mere eme nke mkparịta ụka ma ọ bụrụ na ị na-emeghe ngwa ebe ọ bụ na nke ikpeazụ reply.
Ọsọsọ ngwa toggles
Akpa ogbo nke ngosi ndo akwatu now agụnye a top n'usoro nke ngwa toggles, nke ahụ kwaturu ọzọ ikpughe dum ọtụtụ. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
N'elu Ịma Ọkwa Google nwekwara etinye otu ahịrị akara ngosi maka toggling atụmatụ dị ka Wi-Fi, Bluetooth, ihuenyo adiana na yiri, nke a pụrụ ngwa ngwa tapped-enweghị ịgbasa zuru set nke ngwa toggles. Ọ na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke swipes mkpa iji gbanyụọ Wi-Fi, dị ka ọmụmaatụ, otu na bụ a dị mfe, -enye aka ọhụrụ adianade.
Ị nwere ike hazie ihe na-egosi na e nwere, site modifying ihe bụ ihe na n'elu nke zuru ngwa ngwa toggles ebi ndụ. Ịdọrọ we si n'elu na abụọ mkpịsị aka ka emepe ahụ zuru ngwa ngwa ntọala ebi ndụ ke kiet ke otu ngagharị.
Multi-window-eme ka Android mbadamba ihe bara uru n'ihi na arụpụtaghị na ike ga-eji ma na odida obodo ma ọ bụ Eserese. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Multi-window, ma ọ bụ n'akụkụ-na-n'akụkụ gbawara n'etiti ihuenyo support, bụ ndị ọzọ nnukwu ọhụrụ ọtọ adianade. E nwere ụzọ atọ iji rụọ ọrụ ya. Ịpị na-ejide ndị na-akpọ nnyocha button na otu ngwa on ihuenyo invokes na nso nso-eji ngwa ọdịnala ndepụta na a gbawara n'etiti ihuenyo echiche iji họrọ a abụọ ngwa na-etinye on ihuenyo. I nwekwara ike ime ya na nso nso-eji ngwa ọdịnala ndepụta site taping na-ejide otu n'ime ndị ngwa ọdịnala dị na ndetu na-adọkpụpụta na elu ihuenyo ma ọ bụ n'aka ekpe ma ọ bụ aka nri n'akụkụ ma ọ bụrụ na odida obodo, ekwe ka ị na-eburu ndị ọzọ ngwa site na listi.
A zoro ezo usoro ọrụ na System UI tuner-arụ ọrụ site swiping na ihuenyo site na nnyocha button.
Otu ugboro na gbawara n'etiti ihuenyo mode, Nougat dịkwa otú ahụ ka Windows na iOS. Ọrụ nwere ike ịdọrọ na nwa mmanya na n'etiti ịgbanwe size nke gbawara n'etiti, ma ọ bụ wepụ ya kpam kpam. Ịpị na-ejide nnyocha button, nke na-egosi dị ka abụọ halves mgbe nọ n'ọrụ, ọ ga-akagbu multi-window kwa.
Eserese multi-window mode na ama bụ nnọọ uru, ma odida obodo gbawara n'etiti ihuenyo ike bara uru na ibu ngwaọrụ. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ọ na-arụ ọrụ n'ezie ọma, na ọ fọrọ nke nta ọ bụla ngwa na-akwado ya. Naanị a nnọọ nta nke ngwa ọdịnala ifịk ifịk igbochi ya, na ndị e wee emelitere n'ọdịnihu dị nso na-akwado multi-window.
Ọ bụ a atụmatụ na a ga-abụrịrị na e nwere ruo ogologo oge maka gam akporo mbadamba na-eme ka ha ọzọ na-arụpụta ka ọrụ na ígwè ọrụ. Ọ bụ na-erughị bara uru n'ihi na smartphones, ọ bụ ezie na odida obodo multi-window on nnukwu-ihuenyo phablets ike bara uru na ọnọdụ ebe ị chọrọ ka na-anya na ihe abụọ n'out oge, dị ka a map na a mkparịta ụka.
Ugboro abụọ tap nnyocha ka ịgbanwee gaa na-adịbeghị anya ngwa
Abụọ-ịme ọpịpị nnyocha button ga-ịgbanwee ogologo ikpeazụ-eji ngwa, nke na-eme bouncing n'etiti abụọ égwu a otutu ngwa ngwa. Copy ederede ma ọ bụ na njikọ n'etiti ngwa bụ ugbu a ngwa ngwa. ngwaọrụ ndị ọzọ, gụnyere OnePlus 3 nwere a atụmatụ maka mgbe, ma ọ dị mma ka-ahụ ya butere n'ime Android.
Ogologo ndụ batrị ekele Doze 2.0
Onye nke kasị mma ibe n'ibe banyere Android 6.0 Marshmallow bụ iwebata Doze, a mma na aka zọpụta batrị mgbe ekwentị ma ọ bụ mbadamba e-akpụ akpụ, dị ka a na-etinye a oche. Ọ nwere mmetụta dị na njikere ndụ batrị.
Android 7.0 Nougat-emetụta otu batrị-inyịme atụmatụ na mgbe ekwentị na-akpụ akpụ kwa. Mgbe ihuenyo bụ gbanyụọ, Nougat nwere ọtụtụ ihe tighter njikwa na ihe nwere ike na ike ịnweta data, otú ugboro ugboro na otú mgbe ọ na kpọtere ekwentị elu. The N'ihi bụ n'etiti 15 na 20% ogologo ndụ batrị na m ule on a Nexus 6P.
Ihu ude ndozi
Nougat mma Android si smartlock feature, -eme ihu kenha budata ngwa ngwa na ihe ezi. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Google si smart mkpọchi atụmatụ ndidi gburugburu n'ihi na a mgbe. Ha na-eji a Nchikota sensọ ịmata mgbe a ga-deactivate ákwà ngebichi mkpọchi na mgbe iji jide n'aka na passcode na-mgbe achọrọ.
Ihu ude dịwo maka mgbe, ma tụkwasịrị obi iru usoro ka budata mma ebe ọ bụ na Android 6.0 Marshmallow, nke bụ karịsịa bara uru n'ihi mbadamba na ngwaọrụ ndị ọzọ na-enweghị a akara mkpisiaka nyocha. Iji a Pixel C, usoro we si ubé bara uru na iberibe oge, mgbe ọ na-arụ ọrụ ka akpọchi ngwaọrụ banyere 80% nke oge.
N'ezie, na onlytimes ọ na-aghọta irum e mgbe m nọ na-adọgbu ugogbe anya maka anwụ na gabiga ókè nnukwu ekweisi.
n'ozuzu Android 7.0 Nougat bụ oké update. Ọ na-eme ụfọdụ ịrịba mgbanwe n'okpuru hundu na-enye uru gụnyere ogologo ndụ batrị. The visual Tweaks nwere aghụghọ na ọtụtụ ga-abụ na a ga masked site customisations mere ka Android site-atọ ndị ọzọ na-emepụta.
The ngwa-reply mgbakwunye Ịma Ọkwa na-eche dị ha gaara e si mmalite. Ma eleghị anya, ihe kasị mma obere tweak na niile emepụta kwesịrị now ịmụta bụ inwe ike okpukpu abụọ-enweta na nnyocha button ngwa ngwa ima elu n'etiti abụọ gara eji ngwa ọdịnala. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ihe ngwa ngwa karịa bouncing ka a menu na azụ, na-ewe dịghị dexterity mgbe nile iji rụọ ọrụ.
Otu ihe doro, Otú ọ dị - ma ọ bụrụ na ị mere na-amasị Android Marshmallow, Nougat na-adịghị ga-eme ihe ọ bụla iji gbanwee obi gị.
Google si Nexus ngwaọrụ, gụnyere Nexus 6, 5X, 6P, 9 na Nexus Player, nakwa dị ka Google Pixel C mbadamba, ga-enweta update n'elu-the-ikuku malite taa. The LG V20 ga-akpa ọhụrụ smartphone ẹkedori na Nougat ruru maka ntọhapụ n'oge na-adịghị.
Google Android 6.0 Marshmallow review: ọzọ polished, ukwuu akara na ogologo ndụ batrị
43512	5 mkpụrụ okwu, Android, Nkeji edemede, Google, mobile igwe, Nyocha, Samuel Gibbs, Smartphones, software, mbadamba kọmputa, Technology
← Bụ ebe nchekwa gị dị ka Ezi ka I Chere na ọ bụ? Samsung Galaxy Cheta 7 Review →